Top njem nleta na Odisha | Agbụrụ, Buddha & Egwuregwu
Orissa njem njem
Odisha bụ ala nke ebe nkiri njem nleta. Site n'ụsọ osimiri gaa n'ọdọ mmiri, obodo nta dị iche iche na obodo nta, obodo Buddhist na ụlọ nsọ oge ochie, ogige ntụrụndụ na ebe obibi anụ ọhịa, mmiri mmiri na-aga n'ọdụ ụgbọ elu.
Ozi izugbe: Oge kachasị mma iji gaa: Ọ dị mma inwe njem nleta n'etiti October - March. Ụdị njem nke a kachasị amasị: Toyota-Innova / Tavera / Scọpio / Tempo Traveler dabere n'otú ìgwè dị. Anyị na-ahazi ụlọ nkwari akụ na agbụrụ ma na-agbalịrị ịnye ụlọ ndị kachasị mma / hotels na mpaghara ndị a ka i wee nweta nkasi obi kachasị.
Orissa Buddhist ebe
Ratnagiri bụ ebe a na-akpọ Mahavhara, ma ọ bụ ebe obibi ndị mọnk Buddha, na Brahmani na ndagwurugwu Birupa na district Jajpur nke Odisha, India. Ọ bụ akụkụ nke Ụlọ Akwụkwọ Puspagiri, yana Lalitgiri na Udayagiri. Ratnagiri guzosiri ike n'oge na-adịghị anya karịa ọchịchị Gupta eze Narasimha Baladitya na ọkara nke mbụ nke narị afọ nke isii OA, ma nwee ọganihu ruo narị afọ nke iri na abụọ OA.
Odisha Ndagharị Ntugharị
Sand Pebbles Mgbatị Ngosipụta ga-egosi gị nke a na ọtụtụ ndị ọzọ. Odidi Odisha anyị na Triangle Golden bụ njem ị ga-enweta. Ọ bụ usoro ihe nkiri 14 nke na-ekpuchi Bhubaneswar, Nuapatna, na Maniabandha nke a ma ama maka Olasingh Textile Village, Chikiti Textile Village, Sambalpuri Textile Villages gburugburu Sagarpalli na Buttupalli, Barapalli Textile Village, Attabira Textile Village, Sericulture Projects, na Tussar Silk Village dị ka Fatipur